Nhau - Nei OLED ine hutano kupfuura LCD
Nei OLED ine hutano kupfuura LCD
Chiedza chidiki chebhuruu, OLED kuratidza kuratidza kunonyanya kusununguka kumeso evanhu uye zvimwe zvinhu zvinoita kuti OLED ive noutano kupfuura LCD. Shamwari dzinowanzo shanyira Chiteshi B dzinowanzonzwa mutongo uyu: Barrage Eye Protection! Muchokwadi, ini ndoda kuwedzera ziso rekudzivirira Buff kwandiri, Iwe unongoda nharembozha kana TV yakagadzirwa neOLED.Zviverengero zvakawanda zvezvidzidzo kumba nekune dzimwe nyika zvinoratidza kuti, maOLED skrini ane akakosha zvakanyanya maererano nehutano kupfuura LCD skrini. Zvirinani panguva ino, Nhare mbozha uye maTV akashongedzerwa neOLED ndiwo marongedzero ane kukuvara kudiki kumeso. Mhuri yega yega ine vana, Vese vanofanirwa kusarudza OLED kuratidza. Tinogona kutoti izvi: Kusarudza OLED mudziyo kwakaenzana nekusarudza hutano.
Kuzivisa musimboti wechinyakare sikirini inokuvadza maziso
Izvo zvinhu zviviri zvinokonzeresa "kukuvara kwemaziso" mune echinyakare LCD / LED skrini zvinyoro bhuruu uye kudzima.
Chiedza chebhuruu mwenje une simba-guru unoonekwa, Inofungidzirwa kuti ine zvinokuvadza zvakadai sekusagadzikana kweziso uye kukuvara kweziso, Ichi zvakare chinhu chinotungamira kuzvirwere zvakaita segomarara, chirwere cheshuga, chirwere chemoyo, kufutisa uye kushaya hope.
Chiedza chebhuruu ndiyo yepamusoro simba rehuremu hwechiedza chinoonekwa. Simba iri rinokwanisa kupinda nepasefa yechisikigo yeziso kuseri kweziso.
Huwandu hwekuburitswa kwechiedza chebhuruu hwatinowana kuburikidza nekushandisa kwemajenari zvigadzirwa zviri kuwedzera nekukurumidza mazuva ese, Izvi zvakakonzera kukuvara kusingaperi kumaziso edu. Mhedzisiro yechiedza chebhuruu inowedzera, Inogona kukonzeresa zvirwere zvemaziso, Zvakadai sekushomeka kwemacular.
Kunyanya vana, iyo retina haina kusimba, Iyo iri nyore kune bhuruu mwenje. Tsvagiridzo inoratidza zvakare kuti, Kujekesa kune bhuruu mwenje usati warara kunodzivirira pakavanzika che melatonin, Uye zvakanyanya kunonoka kurara kwakadzika kweREM. Utano saka hwakakanganiswa zvakanyanya. Mukufamba kwenguva, Izvi zvinogona kutungamira mukuziva kwekudzikira uye kukura kwezvirwere zvisingaperi.
Kunyanya iyo bhuruu mwenje kukuvara kwema smart mafoni, Iyo inotanga kutanga pakati pemidziyo yese. Nekuti chinhambwe chekushandisa nharembozha chinowanzo kuve padhuze nemimwe michina yemagetsi, Uye zvakanyanya kuda kuchishandisa murima, Iko kukuvara kunowanzo kuve kwakakwirira.
Flicker inogona zvakare kukonzera "kukuvara kwemaziso".
Flicker iko kuchinjika kunooneka mukujeka pakati pemakonduru anoratidzwa pane inoratidzwa vhidhiyo. Iyo inonyanya kukodzera kune cathode ray tube (CRT) materevhizheni, macomputer monitors, uye plasma makomputa skrini uye terevhizheni yekuvandudza nguva.
Kushandura sosi yechiedza kunokonzeresa. Inokurumidza kumhanyisa kumhanya, Iyo inokurumidza iyo skrini inopenya. DC kudimikira tekinoroji inogadzirisa kupenya nekudzora zvakananga izvozvi kumativi ese maviri echiedza-chinoburitsa chishandiso, Mazhinji maLCD skrini anoshandisa DC kudzima. DC ichizvimhara pachayo inzira yakapusa. Asi ine zvipingaidzo zviri pachena. Nekuda kwema wavelengths akasiyana eaya matatu ekutanga mavara, DC kudonha inokonzeresa isingadzivisike color switch kana kupenya kwakanyanya kuderera. Izvi zvinotungamira kukuneta kwemaziso.
Chinyakare LCD / LED skrini, Hazvina basa kuti ndeepapi divi, Uye haisi sarudzo yakanakisa yehutano.
Dudziro yeOLED yekuchengetedza maziso kutsvagura kumba nekune dzimwe nyika
asi, Zvese zvepamusha uye zvekunze zvidzidzo zvakaratidza kuti, OLED iri chaizvo inowoneka-ziso kupfuura LCD.
Muna Kurume wegore rino, Beijing Tongren Hospital yakabatana neCapital Medical University yakaita bvunzo dzakakodzera paOLED maziso ezvehutano. Izvo zvemukati bvunzo zvinosanganisira bhuruu mwenje kuburitsa bvunzo, kuzviisa pasi kuona kuneta -kuona nyaradzo bvunzo, chinangwa chekuona kuneta-ziso pekugara bvunzo paOLED TV uye QD-LCD TV.
Mhedzisiro bvunzo inoratidza kuti, Zvese zvinokanganisa zviratidzo zveOLED maTV zvakaderera pane zveQD-LCD TV. Mhedziso ndeyekuti, Iyo bhuruu-kubviswa kuburitswa kweOLED TV ishoma pane iyo yeQD-LCD TV, Panguva imwecheteyo, kukanganisa kune kuneta kwekuona zvakare kudiki.
Naizvozvo, Kuneta kunoonekwa mushure mekuona OLED TV kwenguva yakareba ichave yakaderera zvakanyanya kupfuura iyo yeQD-LCD TV. Hutano hutano hwemaziso uye kuchengetedzeka.
Hazvisi paTV chete, Ndozvazviriwo pamafoni mbozhanhare.
Gumiguru 2018, Chidzidzo kubva kuTsinghua University kuTaiwan chinoratidza kuti, Iwo maOLED anoratidza ekupedzisira iPhone XS uye XS Max ane hutano kupfuura maLCD anoratidza pane apfuura iPhone mamodheru.
Sechikamu cheayo "Kurwisa LED uye White Mwenje Njodzi" kutsvagisa, yeTaiwan Tsinghua University ("National Tsing Hua University") timu yekutsvaga inotungamirwa naPurofesa JHJou yakagara ichitsigira OLED mwenje.
Muna 2015, Muzvinafundo JHJou akamboburitsa chikumbiro, Anoda vatengi kuti vanzwisise njodzi dzema LED, Hurumende dzinofanira kuita mitemo mitsva, Zvinotenderwa kuti zvigadzirwa zvine mwenje zvinofanirwa kuratidza zvakajeka yavo.
Ichi chidzidzo chinofananidza zviratidzo zviviri pakati peiyo iPhone 7 ine LCD inoratidzira uye neazvino iPhone XS Max ine 6.5-inch OLED kuratidza.
Yekutanga ndeye Maximum Inotenderwa Kufumura (MPE).
Iyi ndiyo chiyero cheiyo nguva iyo pamberi payo diso risati rapiswa mushure mekuratidzwa kuchionioni. Iyo bvunzo inoenderana nechiedza chakaburitswa zana zana. Iyo MPE ye iPhone 7 is 288 masekondi, Iyo MPE yeiyo iPhone XS Max ndeye 346 masekondi, Izvi zvinoreva kuti OLED yakachengeteka kupfuura LCD.
Chiratidzo chechipiri ndiMelatonin Suppression Sensitivity (MSS). Ichi chiero chakayerwa, Chishandiswa kuburitsa muzana ichienzaniswa nechena bhuruu kudzvanya, 100% MSS yakafanana nekutarisa kwakachena bhuruu mwenje. OLED inoita zvirinani-iyo MSS yeiyo iPhone 7 LCD skrini iri 24.6%, Iyo MSS yeiyo iPhone XS Max AMOLED skrini ndeye 20.1%.
Muchokwadi, Ongororo dzekunze dzakaratidzawo dambudziko iri.
IAmerican technology media REWA yakaburitsa mushumo unonzi "Ndeupi Anokuvadza Kumeso? OLED kana LED? ” muna Kukadzi gore rino.
Mhedziso yemushumo uyu ndeiyi: OLED inogona kudzikisa mwenje webhuruu.
Imwe nyanzvi inozvimiririra yemhando yepamusoro yekutarisa kambani inonzi Intertek muUnited Kingdom yakagumisa kuti, Iyo bhuruu mwenje inoburitswa nemwenje weOLED iri pasi pe10% yechiedza chebhuruu chinoburitswa nemwenje weLEM nekupenya kwakafanana uye tembiricha tembiricha.
Tinogona kuona zviyeuchidzo kubva patafura pazasi.
Rimwe dambudziko kuratidzwa kwemavara.
Isu tese tinoziva kuti ma AMOLED ekuratidzira ndiwo masikirini akagadzirwa neazvvo-anovhenekera zvinhu zvehupenyu. Izvo hazvidi LCD backlight, Nekuti kana iro danda remwenje richipfuura nepakati pezvinhu zvakasikwa, Iwo mapikisheni anoburitsa mwenje pachawo. Naizvozvo, Zvichienzaniswa neyakajairika LCD skrini, OLED ine zvayakanakira senge yepamusoro musiyano.
Tinogona kuona mutsauko pakati pezviviri kubva pamufananidzo uri pazasi.
Mumashoko akareruka, OLED inoratidza nhema nhema nhema,, LCD iri grey. Kana iyo LCD iine musiyano wakakura mukupenya kweiyo imwechete skrini, Kune chiitiko chesajeka ruzivo muzvikamu zvine rima uye mifananidzo yakawandisa muzvikamu zvinopenya. Kanganisa chiitiko chinoonekwa, Chikonzero kuona kuneta.
Kutenda kune yega-inopenya tekinoroji, OLED inogona zvechokwadi kuratidza "yakakwana dema", Uye uwane isinga pesane musiyano. Iko kugona kuzvimiririra pixel yega yega inobvumira zvese zvakadzama paOLED TV skrini kuti iratidzwe zvizere pasina kukanganiswa neiyo yakazara skrini kupenya.
Iyo yakachena ruvara kuratidzwa kweOLED iri kunyatso kusununguka kune ziso remunhu. Inokodzera kushandiswa kwenguva refu.
Kusarudza OLED zvinoreva kusarudza hutano
"Myopia" yakagara iri dambudziko hombe rinotambudza vechidiki vechiChinese.
Mu2017, World Health Organisation yakamboburitsa gwaro rekutsvagisa richiti, Kune parizvino vangangoita mazana matanhatu emamiriyoni evarwere vemaopia muChina. Inenge hafu yehuwandu hwevanhu veChina. Pakati pavo, iyo myopia chiyero chejunior chikoro chepamusoro vadzidzi uye vadzidzi vekoreji munyika yangu yadarika 70%. Uye iyi data ichiri kukwira gore rimwe nerimwe, Iyo mwero weyopia pakati pevechidiki vari munyika yangu wakarongedza pekutanga pasirese.
Mukupesana, iyo myopia mwero pakati pevechidiki veAmerica ingangoita 25%. Australia ingori 1.3%, iyo myopia mwero kuGerman yakachengetedzwawo pazasi pe15%.
Iyo "Inonzwisisika Kudzivirira uye Kudzora kweMyopia muVana neVadiki Implementation Chirongwa" zvakaburitswa pamwechete nematare masere ataurwa. Pakazosvika 2030, iyo myopia mwero wevadzidzi vepuraimari vadzidzi yakadzika kusvika pasi pe38%. Ndokunge, mumakore anopfuura gumi, Iyo myopia mwero wevadzidzi vepuraimari vadzidzi yakadonha ne7,7 muzana mapoinzi.
Kubva pane ino maonero, OLED skrini akakodzera kwazvo kumhuri dzeChinese. Nekuwedzera kwemapakati emapoka evatengi, Maonero ekushandisa kwevanhu akachinjawo zvinoenderana, Hutano hwemaziso hwavewo chinhu chekutenga icho vatengi vanonyanya kutarisisa.
Nhasi, vazhinji vari pakati nepakati vari kushanda nesimba kuti vavandudze yavo "pfungwa yebasa", Kuzivikanwa kwemajimni uye kwega kugwinya kwawedzera, uye kunze kwemarathoni ndiyo yakajairika mararamiro. Mune manejimendi yehutano hwevana, Hutano hutano hwakaitawo hukama hwakakosha.
Mumusika wepaTV wepamusoro-soro, "Hutano hwemaziso" hwave chinhu chikuru chinodiwa nevatengi vevashandisi vepamusoro, Dzimwe mhuri dzinosarudza kusarudza TV dzine hutano uye dzinoyevedza.
Aowei Cloud Network (AVC) yakaita kuferefeta kwakanangana nevashandisi veTV vekumusoro-soro. Dhizaini Ratidziro, Shanduko munzvimbo yekudyiwa uye chimiro chekushandisa, Kurudzira iyo yekushandisa pfungwa kubva kuhupofu uye kudzikisira kune yakasarudzika uye mhando, Uye mhando inomiririra yakakwira-magumo uye hutano.
Panyaya yeTV, Chimiro chemhuri chevashandisi vekupedzisira veTV chakanyanya kuroora nevana. Chikamu chemaTV achangotengwa ehutano hwevana chakatosvika gumi muzana.
Uye zvakare, Pakati pezvigadzirwa zvepamusoro-soro zvine mukurumbira mushandisi, maOLED TV akakunda kufarirwa nevanhu vazhinji nezvibodzwa zve8,1, Pakati pezvikonzero zvikuru nei vashandisi vachisarudza maOLED TV, "Hutano Hwemaziso" akaverengera 20.7%, wechipiri chete kune izvo zviviri zvingasarudzwa zve "Clear Picture Quality" uye "Latest Technology".
OLED maTV ane akakosha zvakanakira hutano hwemaziso, Ndiwo zvakare akakodzera sarudzo yehutano kumhuri dzeChinese.
Izvi zvakangoita sechirevo chisinganzwisisike chemudzidzi wechiDutch Spinno nezvehutano:
Kuchengeta hutano ibasa rehupenyu.